Isixakaxaka seRoyal AM ne-PSL sizobambezela ukuqala kwesizini
Sekuyacaca ukuthi ukuqala kwesizini entsha yezigaba zePremier Soccer League (PSL) – iDStv Premiership neGladAfrica Championship kuzobambezeleka. Lokhu kungenxa yokungaxazululeki odaba lokuthi yiliphi iqembu okumele linyukele esigabeni sePremiership lisuka kwiChampionship.
Umbango waqala kusanda kuphothulwa imidlalo ngesikhathi i-PSL iyalelwa yinkantolo ukuba ibeke iSekhukhune United njengompetha beChampionship. Lokhu kwasho ukuthi iRoyal AM iqede endaweni yesibili futhi kumele idlale emidlalweni yokuhlunga.
Kodwa yafaka isicelo sokuba iphikise lesi sinqumo senkantolo kanti namanje isalinde isinqumo senkantolo ngokuthi iyanikwa yini ugunya lokudlulisa icala noma cha.
Kumanje inecala okumele ilihambe esigungwini se-PSL sokuqondisa izigwegwe kulandela ukugoloza kwayo ukuyodlala imidlalo yokuhlunga. Leli cala bekumele lingene ngoMgqibelo kodwa labuye lahlehliselwa uJulayi 31.
Isizathu sokuhlehliswa kulokhu wukuthi umengameli weRoyal AM, uShauwn “MaMkhize” Mkhize ubengene akwazi ukulithamela ngenxa yokuthi usanda kuthola umjovo womgomo weCovid-19.
Ngokujwayelekile, isizini iqala ngesonto lesibili ku-Agasti ngemidlalo yeMTN8, kodwa kulokhu akubonakali kuzokwenzeka kanjalo. Noma iRoyal AM ingayichitha inkantolo, ngeke kusheshe kubuyelwe enkundleni.
Kusazodingeka kuqulwe icala layo lokungayi emidlalweni kanti ngokusho kukamshushisi wePSL, uNande Becker, kungenzeka isigwebo kube wukuthi imidlalo yayo iqalwe kabusha.
Uma kwenzeka iliwina enkantolo icala, kubuyiselwe yona ekubeni ngompetha beChampionship, lokho kuyochaza ukuqalwa kabusha kwemidlalo yokuhlunga sekungene iSekhukhune United.
FUNDA NALA: Kusolwe umqeqeshi ele-Under 23 lishwa yiFrance kuma-OLympics
Lokhu kungasho ukuthi kumele iqale phansi idlale kabili neChippa United neRichards Bay ngokulandelana. Nakho lokhu kungaluqala nje olunye utalatiya ngoba neChippa isingagoloza kwazise yona yanikwa amaphuzu amathathu yagcina ikwazile ukubuyela kwiPremiership.
Okwamanje kusalindwe isinqumo senkantolo ngesicelo seRoyal AM esalalelwa ngoJulayi 14. Isinqumo bekulindeleke siphume ngesonto elidlule.
Impempe ithole ukuthi iRoyal AM iyaqhubeka nokulungiselela ukuthi izobe idlala kwiPremiership ngesizini ezayo. Umthombo osondelene naleli qembu uthe abadlali basayiniswe izinkontileka zesigaba esiphezulu futhi zesikhathi eside.
“Ayikhulunywa laphayana enye indaba ngaphandle kokuthi bazobe bedlala kwiPremiership ngesizini ezayo,” kusho umthombo. ISekhukhune United nayo iyaqhubeka ngamalungiselelo ayo okudlala esigabeni esiphezulu.
Previous Previous post: IFrance ivulele induku kwasolwa izinguquko zikaNotoane kuma-Olympics
Next Next post: UHunt ukhala ngokungabhalansi kahle kweqembu lakhe kwiChippa